Ọchịchị Alaeze steeti iji gosipụta ndị na-ere ahịa mmapụta ka ha mee ememme afọ 90
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọchịchị Alaeze steeti iji gosipụta ndị na-ere ahịa mmapụta ka ha mee ememme afọ 90
Ụlọ ọrụ ebe a na-enweta ihe nrite nke sitere na mpaghara Bronx's Port Morris ga-ere biya anọ ahọpụtara-American Pale Ale, World Gone Hazy IPA, Smile My Guy IPA, na Das Bronx Oktoberfest-site na ụgbọ ihe ncheta afọ 90 pụrụ iche na 86th Empire State Building. ala.
N'ime afọ iri itoolu, Alaeze Ukwu State Building (ESB) nwere ọtụtụ ihe toast ka ọ na-ewetara Oktoberfest na akara ngosi 90th Floor Observatory ya na Bronx Brewery na Tọzdee ọ bụla ruo Satọde, Ọktọba 86-14 site na 30-5 mgbede. oge mbụ n'akụkọ ihe mere eme nke ụlọ a ga -enye mmanya n'ime Ahụmịhe Observatory.
Jean-Yves Ghazi, onye isi oche nke Empire State Building Observatory kwuru, "Anyị na-aga n'ihu n'ememe ncheta afọ 90 nke ụlọ kacha ewu ewu n'ụwa n'oge ọdịda a na mmekorita ya na Bronx Brewery ọkacha mmasị na mpaghara." Site na mmejuputa ogo gburugburu ebe obibi anyị na-eduzi ụlọ ọrụ, ndị ọbịa anyị nwere ike ịnụ ụtọ ihe ngosi dijitalụ ọhụrụ na mmetụ aka tupu ha ezuo ike na ihe ọ eveningụ eveningụ mgbede na ọmarịcha ogo 360, echiche ikuku na New York. Obodo nwere ike inye. ”
Ọchịchị STATE Grill na Bar nke Alaeze Ukwu State ga-enye obere cheesecakes ụdị NY dị $ 10 n'akụkụ nhọrọ onye na-eme biya. Bronx Brewery bụ onye na-ere ahịa nke abụọ na mmemme mmapụta Observatory nke ụlọ mgbe emechara ihe ịga nke ọma n'August ya na onye na-ere kuki m.
Sean Valenti, onye na -ekwuchitere Bronx Brewery kwuru, "Anyị nwere nganga isonyere ndị otu ụlọ ọrụ Alaeze Ukwu ime ememme Oktoberfest. "Ọrụ anyị metụtara obodo, imepụta ihe na enweghị ike, nke bụ ihe niile na -abata n'uche mgbe anyị na -eche maka Owu Alaeze Ukwu."
A na -agba ndị ọbịa ume ịpụ ihe ọ onụ onụ ha na ihe ngosi 86th Floor Observatory na akara foto na #PopUpTop maka ohere iji gosipụta ya na ọwa mmekọrịta ESB. A ga-ekwuputa mmapụta kwa ọnwa n'ọdịnihu na Empire State Building Observatory iche.
Bartlett na-akparịta ụka na ụgbọ elu Emirates iji webata…
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya Malta North America na-enwetala 3 kacha mma…